Wararka - Kala soocida midabaynta falcelinta
Marka loo eego kooxaha falceliska ah ee kala duwan, midabada falcelinta waxaa loo qaybin karaa laba nooc: nooca triazene symmetrical iyo nooca vinylsulfone.
Nooca triazene Symmetric: Noocan midabaynta fal-celiska ah, sifooyinka kiimikaad ee atamka koloriinta ee firfircoon ayaa aad u firfircoon.Inta lagu jiro habka midabaynta, atamka chlorine waxaa lagu beddelaa fiilooyinka cellulose ee dhexdhexaadka ah ee alkaline waxayna noqdaan kooxo ka tagaya.Falcelinta u dhaxaysa dheeha iyo fiber cellulose waa falcelinta beddelka nucleophilic bimolecular.
Nooca Vinyl sulfone: vinyl sulfone (D-SO2CH = CH2) ama β-hydroxyethyl sulfate sulfate.Inta lagu jiro habka midabaynta, β-hydroxyethyl sulfate sulfate waxay ku soo daadataa dhexdhexaad dhexdhexaad ah si ay u sameyso koox vinyl sulfone ah.Kooxda vinyl sulfone waxay ku darsataa fiber cellulose si ay u maraan falcelin dheeri ah oo nucleophilic ah si ay u sameeyaan dammaanad covalent ah.
Labada midab ee fal-celiska ah ee aan kor ku soo sheegnay ayaa ah noocyada ugu muhiimsan ee dheeha falgal ee leh wax soo saarka ugu weyn adduunka.Si loo hagaajiyo heerka hagaajinta midabaynta falcelinta, laba kooxood oo falcelis ah ayaa la soo galiyay molecule dheeha sannadihii u dambeeyay, kuwaas oo kala ah midabyo fal-celin leh.
Midabaynta falcelinta waxa loo qaybin karaa dhawr taxane ah iyadoo loo eegayo kooxahooda falcelis ee kala duwan:
1. Midabka falcelinta ee nooca X waxa ku jira kooxda falcelinta dichloro-s-triazine, taas oo ah dheeha falcelinta heerkulka hooseeya, ku habboon in lagu midabeeyo fiber cellulose at 40-50 ℃.
2. Midabka falcelinta ee nooca K waxa ku jira monochlorotriazine reactive group, kaas oo ah dheeha falcelinta heerkul sarreeya, oo ku habboon daabacaadda iyo rinjiyeynta suufka.
3. Midabka falcelinta ee nooca KN waxa ku jira kooxo fal-celin ah oo ah hydroxyethyl sulfone sulfate, kuwaas oo ah midabada falcelinta heerkulka dhexe.Heerkulka midabaynta waa 40-60 ℃, oo ku habboon dheehidda duub duubka suufka ah, midabaynta qabowga badan, iyo daabacaadda dheeha rogan sida midabka asalka ah;sidoo kale ku haboon dheeha dharka hemp.
4. Midabka falcelinta ee nooca M-ku waxa uu ka kooban yahay laba kooxood oo falcelis ah waxana uu iska leeyahay dheeha falcelinta heerkulka dhexe.Heerkulka midabaynta waa 60 ° C.Waxay ku habboon tahay daabacaadda heerkulka dhexdhexaadka ah iyo midabaynta suufka iyo linenka.
5. Midabka falcelinta ee nooca KE waxa ku jira laba kooxood oo falcelis ah waxayna ka tirsan yihiin midabaynta falcelinta heerkulka sare, kuwaas oo ku habboon midabaynta suufka iyo dharka linenka.
1. Midabku wuxuu la falcelin karaa fiber-ka si uu u sameeyo dammaanad covalent ah.Xaaladaha caadiga ah, isku-dhafkan ma kala go'i doono, markaa marka dheeha falcelinta lagu dheehdo fiber-ka, waxay yeelan doontaa midab wanaagsan, gaar ahaan daaweynta qoyan.Intaa waxaa dheer, fiberku ma noqon doono mid jajaban sida midabada qaar ka dib marka la midabeeyo.
2. Waxay leedahay wax qabad heersare ah, midabo dhalaalaya, dhalaal wanaagsan, fududahay in la isticmaalo, chromatogram oo dhamaystiran, iyo qiimo jaban.
3. Waxaa horeba loo soo saari karaa tiro badan oo Shiinaha ah, taas oo si buuxda u dabooli karta baahida warshadaha daabacaadda iyo midabaynta;Waxa ay leedahay adeegsi badan oo kala duwan, ma aha oo kaliya dheehaynta fiilooyinka cellulose, laakiin sidoo kale midabaynta fiilooyinka borotiinka iyo qaar ka mid ah dharka isku dhafan.
Waxaan nahay alaab-qeybiyeyaal dheeh falgal ah.Haddii aad xiisaynayso alaabtayada, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho.
Wakiilka Saabuunta Acrylic, Shaadhka Laastikada ah Khad Xariir Cad ah, Kaaliyeyaasha Kiimikada, Midabka Heerkulka Sare, Dheejinta Xakamaynta, Dhuxusha Kala firdhisan-La'aanta,